UNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke: Ibhuntshile imibuthano yezenkolo - Bayede News
UNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke: Ibhuntshile imibuthano yezenkolo
Kungakhuliswa imali ezinhlelweni ezahlukene zokonga
Ukubheduka kwesifo iCOVID-19 emazweni ehlukene omhlaba, sekwenze kwakhumbuleka izifundiso zakudala, zokuthi uMdali akekho nje esakhiweni esithize kepha usezindaweni zonke. Lokhu kuqinisekiswe yisinqumo seningi labaholi benkolo namahlelo nokuthe ngokusabela ikhwelo likaMengameli wezwe uRamaphosa ngobungozi bomkhuhlane iCOVID-19 bahlehlisa izinhlelo ezimqoka. Yize uRamaphosa engaliphimisanga elokuhlehlisa izinkozo nemigubho yabezenkolo, isinqumo sokuthi akungahlangani abantu abevile e-100 bekubeka abahleli bemicimbi nezinkonzo enkingeni. Kwenzeka lokhu nje kuleli vele sebekuqalile abakwamanye amazwe. Ibandla elikhulukazi emhlabeni nelinamalungu abalelwa ezi-1 200 000 000 lihlehlise amamisa (izinkonzo) alo ngisho nenhloko yebandla uPapa naye uguqule izinhlelo njengoba engasaveli nje ewindini ezindlini zakhe iVatican kepha uzoshumayela ezinkundleni zokuxhumana.
Abenkolo yobuSulumane nokuthiwa bayizi-1 800 000 000 nokwenza amaphesenti angama-24.1 wabantu emhlabeni nawo asukumele phezulu njengoba kumiswe imithandazo yangoLwesihlanu kwezinye izindawo. Uhlelo olukhulu okuphoqeleke ukuba luhlehle kwabale nkonzo wuhambo lwaseMecca eSaudi Arabia. Lapha abale nkolo baba nomkhuleko wezinsuku ezinhlanu. Kumenyezelwe nokuthi nokuhambela iMosque yoMphrofethi uMuhammad eMedina nakho kumisiwe. Ibandla elikhulu kuleli iZion Christian Church (ZCC), okudume ukuthi iBandla laKwaLekganyane, lihlehlise izinkonzo zaminyaka yonke zePhasika neba sentabeni iMoria, ePolokwane, eLimpopo. Minyaka yonke amabhasi abawujenge abantu beya eMoria nokungagcini nje kuba yinkonzo kepha kuthuthukisa nomnotho wendawo. Ukuhlehla kwale nkozo yezinsuku ezintathu nakanjani kuzozwela kulesiya sifundazwe.
IBandla iNazareth Baptist Church, edume ngokuthi yiBandla laKwaShembe, nokungelesibili ngobuningi kuleli nalo liphoqelekile ukuthi lihlele kabusha izinkonzo zesabatha ngenxa yesibalo sabantu. Okunye okuhlehlile yisikhumbuzo somholi walo ongasekho iNkosi uMbusi Vimbeni Shembe (uThingolwenkosazana) obuzoba ngomhla zingama-28 kuNdasa. Umyalelo ophume kubaholi bawo uthi kuzoba nezikhumbuzo emathempelini ngoba awamumathi abantu abaningi njengoba kuthiwa isibalo sabantu abahlanganayo singedluli kwaba li-100. Uma lo mkhuhlane ungadambi kuze kushaye uNtulikazi kungasho ukuphazamiseka komhlangano kaNtulikazi. Nabenkolo yobuJuda benze okufanayo emhlabeni wonke njengoba behlehlise izinhlelo zabo. Abanye abahlehlise ukukhonza yiBandla lamaBuddhist emhlabeni wonke jikelele.
Ibandla lamaWeseli elivame ukuhanjwelwa yinzinkulungwane zabantu abayolalela inkonzo yamazwi ayisikhombisa libe ngelokuqala ukumemezeka izinguquko nokuhlehla kwezinkonzo. NamaSheshi kanye namanye amahlelo enze okufanayo. I-India, enabantu ababalelwa ezigidigidini ezingu-1,3, yethuka izanya ngoba baningi abantu khona futhi baminyene balandela nenkolo enkulukazi yobuHindu. Babalelwa kwabali-125 abantu asebehaqwe yileli gciwane e-India okwamanje. Lezi zindaba kubukeka zamukelwe ngokuqonda ngamakholwa ngoba lokhu akubuka njengezinhlelo zokugwema inhlekelele. KwaboHlanga nje izinkonzo zivame ukuba kude nekhaya abanye baze baye kwezinye izifundazwe nobekungenza inkinga enkulu kulabo abalandela ukusabalala nokulapha asebehlatshwe yileli liva. Kubukeka iningi livumelana ukuthi uMdali ukhona kuyo yonke indawo, angekhonjwe ezakhiweni noma ezindaweni ezithize kuphela.
nguMfo waKwaNomajalimane Mar 19, 2020